New Year Resolution Quotes With Greetings | Ezi afọ ọhụrụ 2021
Mkpebi Afọ Ọhụrụ 2021
Na-eche echiche nke akpụ a New Year amuma, ntụgharị nke afọ ọhụrụ mkpebi pụtara nke ahụ dị mfe. Ọ bụ naanị ịrapagidesi ike na ha mana nke ahụ siri ike. Onye ọ bụla nwere ike depụta ndepụta nke ”Kwesịrị -Do's” na “Ikwesiri ime” ma ọ fọrọ, mmadụ ole ga-eje ije na okwu a ma a bịa n’iso anyi mkpebi…Ọ na-ewe ọtụtụ ikike na ike tinyere mkpebi siri ike iji mezuo ‘ndepụta’ nke mkpebi – na njedebe nke ubochi obula. Ugbu a, a na-abịa ozi ọma maka atụmatụ mkpebi afọ ọhụrụ na pragmatism nwere ike ịhụ gị site na mkpebi gị na tupu ị mara ya na ị ga-atụgharịrị akwụkwọ ọhụrụ, otu ụbọchị n'otu oge -abịa nke a Ezi afọ ọhụrụ!
Lelee afọ ọhụrụ Mkpebi echiche
1. Ndepụta Dị Mfe :
2. Ejila atụnyere :
3. Bụrụ onwe gị :
5. Gee Obi :
6. Igodo :
New Year Mkpebi Quotes
Afọ Ọhụrụ Mkpebi Meme
Tọọ kọmpat, mfe gh mgbaru ọsọ na-amalite na. Ọ bụrụ na ị hụ onwe gị ka ị na-ewu anlọ Elu Eiffel na lego nke ị nwere, ọ na-aga n'ekwughị mmechuihu na ọ gaghị adị anya.
New Year Mkpebi Quotes Funny 4
Afọ ọhụrụ Memes
Nke a bụ atụmatụ a na-ahụkarị ma a bịa na mkpebi afọ ọhụrụ. Ihe nwere ike ịrụrụ enyi gị ma ọ bụ agbata obi gị nwere ike ọ gaghị abara gị uru, na naanị n'ihi na ị bụ onye pụrụ iche nke nwere usoro mmekọrịta ọha na eze dị iche. dị ka mkpịsị aka aka ọ bụla nke onye dị ndụ pụrụ iche. Mgbe ahụ, Ihe Ndị Ka Mkpa dị mkpa. Agbata obi gị ma ọ bụ mmata nwere ike na-arụ ọrụ n'ebe otu ihe mgbaru ọsọ maka a dị iche iche ihe mere ọnụ afọ ọhụrụ mkpebi
Eziokwu ma ị̀ lụọla di ma ọ bụ nwunye, malite na nti / n'ike mmụọ nsọ onwe gị. Lee anya n'ime, achọla ihe ị na-enweghị. Introspect, jụọ onwe gị ajụjụ abụọ – Enwere m obi ụtọ na onwe m ? (Kwuo ee, ihe niile dabere na iche echiche) Kedu ihe ọ bụ na m nwere ike imeziwanye ? mgbe ahụ ihe dị mkpa bụ – Oge Njikwa. Ọ gwụla ma i wepụtara oge ụfọdụ n'onwe gị, ya mere ọ bụ ihe na-esote ihe na-agaghị ekwe omume iwu obi ụtọ, ndụ dị mma ! nweta oge maka onwe gị. (afọ ọhụrụ amuma)
New Year Mkpebi Quotes Funny 1
4. Tinye Mmụọ Nsọ :
Nchegbu bụ nke kasị ochie & Kachasị ọhụrụ na surest onye iro anyị niile nwere na-ezute na ụfọdụ avatar ma ọ bụ nke ọzọ na anyị ji ọrụ n'aka lifestyles. Enwere Otú ọ dị – a na-akpọ ya Ntụgharị uche ụfọdụ nwere ike ịkpọ mmụọ. Nke a apụtaghị na ọ na-akụ ọtụtụ narị dollar / rupees maka klaasị Yoga kachasị ọhụrụ . Mma nke ntụgharị uche bụ n'eziokwu na ị nwere ike ịme ihe ọbụlagodi n'ụlọ, ma ọ bụ ọbụna n'ebe ọrụ gị. Ọ bụghị naanị na-enye udo nke uche, ọ na - enyere aka imeziwanye ahụike gị.
Tinye aka na mpaghara gị, ndị enyi ma ọ bụ kpọtụrụ nzukọ Charity ma ọ bụ Na-enweghị Uru na-enyere ụmụaka aka, ndị agadi ma ọ bụ ọbụna anụmanụ – ọ bụrụ na ị bụ onye hụrụ ụwa n’anya. Gaa na ha mgbe niile ma ọ bụ otu ugboro n’izu ma were oge gị n’achọghị ọdịmma onwe gị, ọ ga-eju gị anya n’ihe dị iche ọ na-eme. Enwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ ego enweghị ike ịzụta ma ọ bụ ebe a ka ị ga-ahụ ya! Nye onyinye ochie gị, oche, akwụkwọ, ngwa wdg na Enyemaka Enyemaka, kama ịtụfu ha.
New Year Mkpebi Quotes Funny 2
Gbanyụọ ngwaọrụ mkpanaka gị ugboro ugboro ma pụọ ​​n'èzí na-enweghị ha ruo nwa oge kwa ụbọchị. Gbanyụọ site na ụwa nke e-mail na ịntanetị ma kelee onye agbata obi gị nke ọzọ. Ọrụ dị mkpa – ma idebe ndụ na nguzozi dị mkpa ka mkpa! enwere ike iji ya afọ ọhụrụ mkpebi edemede
Ihe ọ bụla Mkpebi afọ ọhụrụ set, ya buru ibu ma obu mmuta ma obu aru aru, na-agbaso ọganihu gị ma echefula ịkwụghachi onwe gị ụgwọ mgbe ọ bụla ị rụzuru ihe dị mkpa. Ọ bụrụ na ike gwụrụ gị ma ọ bụ mee ka ike gwụ gị mgbe ụfọdụ, cheta idowe obere post- ọ bụ na anya nke nwere nti otu liners dị ka ”I Nwere Ike Ime Ya!” na ” Na-aga – ị nọ nso!”
Otu n'ime nnukwu afọ ọhụrụ mkpebi ifelata
Niile Kachasị Mma Nye Gị Ọhụrụ na Afọ Ọhụrụ a!!!
New Year Mkpebi Quotes Funny 3
“Ihe ọ bụla bụ ụjọ na ị na-atụ ụjọ ịme, Mee ya. ”
“Ọchịchọ bụ ohere. Amaja ịme ihe. ”
― Lailah Gifty Akita, Chee echiche nke ukwu: Bụrụ Onye Ukwu!
“Maka mgbanwe, etinyela ihe ohuru na ndu gi dika mkpebi ohuru. Kama, mee ọtụtụ ihe na-arụburu gị ọrụ ma kwụsị ime ihe ndị na-eri oge. ”
“Ndị ọgaranya hà ga-anọgide na-abụ ọgaranya na New Year? Ndị ogbenye ọ ga-anọgide na-abụ ogbenye n'afọ ọhụrụ? Mgbe ahụ maka chukwu ka a ga-esi kpọọ Afọ Ọhụrụ dị ka nke ọhụrụ?”
Afọ ọhụrụ bụ ụzọ ọhụụ eji akpọbata mgbanwe, ịba ụba na ọganihu maka ndụ ọ bụla.
― Amit Ray, Udo nke Udo nke Udo na Eziokwu: Ibi na Positivity
“Ma a manyere ya ma ọ bụ kpọọ ya, mgbanwe a na-apụghị izere ezere. ”
ọchị Afọ Ọhụrụ Mkpebi Meme
Categories 2021, Ezi afọ ọhụrụ, New Year Quotes Tags Mkpebi Afọ Ọhụrụ, New Year Resolution greetings, New Year Resolution quotes Post navigation
101+ Ezi afọ ọhụrụ 2021 Quotes With Images
Facebook na akwụkwọ ahụ aja okirikiri HD
2 thoughts on “Mkpebi Afọ Ọhụrụ 2021”
Pingback: Ezi afọ ọhụrụ 2020 Chọrọ ekele - Ezi afọ ọhụrụ
Pingback: Ezi afọ ọhụrụ 2020 Daalụ - Ezi afọ ọhụrụ
© 2020 Ezi afọ ọhụrụ • Built with GeneratePress